Oru ala Organic & Onyinye Fatịlaịza Na-ebu ebu Ebube na |lọ Ọrụ | YiZheng
Na Obere Mobile Bndi ozo Conyoyor dị fechaa na obere, agagharị na ọdabara na nnukwu loading, iga nkwakọ na n'oge ndị ọzọ, uwe ka iche iche n'oge, na mfe mmezi.
Kedu ihe eji ebu Portable Mobile Belt Conveyor?
Obere Mobile Bndi ozo Conyoyor Enwere ike iji ya mee ihe na ụlọ ọrụ kemịkal, coal, m, ngalaba eletriki, ụlọ ọrụ ọkụ, ọka, ngalaba njem wdg. O kwesịrị ekwesị maka ịbuga ọtụtụ ihe na granular ma ọ bụ ntụ ntụ. Nnukwu njupụta kwesịrị ịbụ 0,5 ~ 2.5t / m3. Enwere ike iji ya na ebufe akpa ma ọ bụ katọn.
Akụkụ nke Portable Mobile Belt Conveyor
(1) Enwere mita 5, mita 8, mita 10, mita 12, mita 15, mita 18, mita 20 na nkọwa ndị ọzọ.
(2) Obosara eriri ahụ nwere ike ịdị ka 500mm, 600mm, 650mm, 700mm, 800mm, 1000mm, 1200mm ....
(3) Okpukpo eriri nwere ike ịdị ka 8mm, 10mm, 12mm, 14mm ..... Jiri akwa Bel Bel dị elu.
(4) Eku dị ka ígwè carbon siri ike.
(5) A na-ejikwa ọsọ ọsọ na-agba ọsọ site na 0.3m / s-2.5m / s, Onye na-ebu belt na-agagharị agagharị nwere ike ijikwa ọsọ ọsọ iji mezuo ihe dị iche iche chọrọ nke nnukwu njem na nkwakọ ngwaahịa.
(6) Ogologo enwere ike idozi ya site na igwe elu na ala, dị mfe ịrụ ọrụ.
All igwe ga-ahaziri site n'ezie chọrọ.
Portable Mobile Belt Conveyor Video Display
Nhọrọ Model Model nke Mobile Mobile
Obosara Obosara （mm)
Belt Ogologo （m) / Ike （kw)
Ọsọ （m / s)
Ike （t / h)
Nke gara aga: Rubber echebe ebu Machine
Osote: Nnukwu Ogwe Akụkụ Na-ebu Nnukwu Oghere
Okwu Mmeghe Gini ka eji eji akwa oku eji ebi ebi? • Energy na ike: Thermal ike osisi, ahihia incineration ike osisi, Biomass mmanụ ọkụ ọkụ, Industrial n'efu okpomọkụ mgbake ngwaọrụ. • Ọkpụkpụ ọla: ikuku na-efe ikuku nke na-ekpo ọkụ (Sintering igwe), Ọkụ coke mmepụta (Furna ...
Okwu Mmalite Gịnị bụ Fatịlaịza Urea Crusher Machine? 1. Fatịlaịza Urea Crusher Machine tumadi na-eji egweri na ịcha ọdịiche dị n'etiti ala na concave plate. 2. nwechapụ size na-ekpebi ogo nke ihe ndinuak, na drum ọsọ na dayameta nwere ike ịbụ kemeghi. 3. Mgbe urea banyere n’ime ahu, ya h ...